डायनामिक व्यक्तित्व मिष्टर दाह्री उर्फ देबराज दुलाल
मंसिर १२, काठमाण्डौ । (मिष्टर दाह्री २०१९)को बिजेता बन्न सफल देबराज दुलाल नेपाली सिभिल ईन्जीनियरको क्षेत्रमा प्रशिद्ध छन । मिष्टर दाह्रीको उपाधि जित्दा उनले १ लाख नगद पुरस्कार र बिदेश घुम्ने आकर्षक प्याकेजहरु पनि पाए ।
उनलाई आफुलाई जिबनमा दाह्री पालेर राम्रै गरेछु, भन्ने उपाधी हातपरेसँगै थप महशुस भयो । जिबनमा कहिलेकाहीँ नसोचेको बाटो पनि पुगीने रहेछ, उनले भने ।
काठमाण्डौ बसुन्धरामा थण्डर प्रोडक्सनले आयोजना गरेको दाह्री प्रतियोगितामा उनी सामेल भए, र अन्ततः उपाधि चुमे । उनको दाह्री पाल्ने सौखको सुरुवात भने बेग्लै छ । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका वडा न. ११ मा ३० बर्षअघि जन्मिएका हुन उनी ।
गाँउकै ईन्द्रेश्वरी उच्च माबिबाट एसएलसी उत्तिर्ण गरेपछि थप अध्ययनका लागि उनी काठमाण्डौ हानिए । कान्तिपुर सिटी कलेजबाट सिभिल ईन्जीनियरमा स्नातक तह अध्ययन गर्दै गर्दा सिन्धुपाल्चोक हेलम्बुमा केही समयका लागि पुगे । त्यहाँ रहँदा १५ दिनसम्म दाह्री नकाटेपछि निकै लामो भैसकेको थियो । सोहीबेला साथी रामकाजी श्रेष्ठले वाउ ! कस्तो सुहाएको भन्न थाले । लौ त्यसै हो भने किन काट्ने त भन्दै गर्दा अन्ततः मिष्टर दाह्री बन्न सफल भएको उनले बताए ।
दाह्री मात्र होईन, कम्मर सम्म छुने उनको केश समेत अरुभन्दा भिन्न छ ।
पुरानो बानेश्वरमा क्यापाबल ईन्जीनियरीङ फर कन्सट्रक्सन एण्ड डेभलपमेन्ट प्रालिका सञ्चालक हुन, दुलाल । घरनक्साका क्षेत्रमा उनको कम्पनी लोकप्रिय छ ।
उनीसँगैका साथी साउदी, कतार, युरोप अष्ट्रेलिया तिर रुमलिरहँदा उनी भने अरुलाई जागिर दिन सक्ने भएका छन । ७ बर्षअगाडि गाँउमा पहिलोपट कृषि सहकारी दर्ता गरी आधुनिक कृषि ट्याक्टरले खेत जोत्न गाँउलेहरुलाई उत्प्रेरित गरेका थिए । २०७२ सालको भुकम्पका बेला उनले भत्किएका घरबस्तीहरुमा धेरै राहत र उद्दारमा खटिए । सधै अरुलाई असल कार्यका लागि उत्प्रेरित गरिरहने दुलाल एक बौद्धिक समाजसेवीका रुपमा समेत परिचित छन । व्यक्तिगत जिबनमा तिब्र आर्थिक बिकासको पाटोलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने उनको बुझाई छ । डायनामिक व्यक्तित्व दुलालको काम गर्ने स्पीडलाई अवरोध गर्ने स्थीतिका बावजुत उनले छलाङ मार्न सफल भए । जिबन रहेसम्म कर्मका पाईला दौडिरहनेछ, उनले भने ।